Yangaphandle Park - Zhengzhou mihla CO Nwabisa, Ltd.
Isisombululo A Venue ngempumelelo
Prodigy Group lugxile ekuboneleleni isisombululo epheleleyo ukuze project park yakho kusonwabisa yimpumelelo. abayili zethu baba baya kusebenzisana kunye neqela lakho ukudala amava elikhethekileyo umdla iindwendwe zakho.
Emva ngokupheleleyo zonxibelelwano zonke iinkalo kunye iinkcukacha, nabayili zethu ukudala nguqulelo 3D kunye izixhobo zobugcisa zamva ukubonisa na isiphumo olubonakalayo yeprojekthi elizayo. Le ngongoma olutshintshayo kwimboniselo inceda abaphathi ukuba benze okungcono.
Nwabisa Equipment Supply
Prodigy Group ziya kwenza amalungiselelo ze ekhwela ngokusekelwe ngenketho yakho kuyilo. Kwakhona, izixhobo ulwenziwo sibamba ezifumanekayo strong iqela kunye nemveliso mihla izixhobo mihla i-R & D.
Ukufakelwa & Operation Training
Iqela nonolwazi uhamba ihlabathi ukuba bajongane nokunxibelelanisa iseti phezulu zokudlala ezilapho, kwaye kukunceda ukuba uqeqeshe abasebenzi asebenza nokugcina izixhobo ngokuchanekileyo, ukuze abathengi bakho kunandipha ekhwela ezikhuselekileyo kumnandi.
Uncedo Technical ziya kunikwa ngexesha, nokuba kubhabha ubuchwephesha ilizwe lakho xa kuyimfuneko. Emergency ucingo kuvuliwe ngo-24 / 7.Prodigy Group zibonelela iindawo abasesichengeni ukulungiselela ukusetyenziswa spare simahla.
Phambi kokuba unikezelo mihla Group zibonelela iindawo abasesichengeni ukulungiselela ukusetyenziswa spare simahla. Emva kokuziswa kwekhithi, siya kubonelela ngaphezu 1000 abaza kuzisebenzisa ukuze ufumane ekhwela abuyele emsebenzini ukuba aphume amanyathelo.